घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू नाबी केता बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB ले फुटबल जीनियसको पूर्ण कथा प्रस्तुत गर्दछ जुन नाम द्वारा सबैभन्दा धेरै परिचित छ; "घाउ डायमण्ड"। हाम्रो नाबी केता बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खातालाई तपाईंको बचपनको मिति सम्म ल्याउँछ। विश्लेषणमा उहाँका बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
नाबी केइटाको बाल्यकालको कथा रमाईलो छ, यदि अनौठो होइन भने। यो पश्चिमी अफ्रिकाको गुयनाको राजधानी कोनाक्रीका एक गरीब केटाको कथा छ जो उसको जन्म पछि असाधारण फुटबल प्रतिभाले सम्पन्न भएको थियो। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Naby Keita बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
सुरू गर्न, उनको पूरा नामहरू छन् नाबी लेई किता। उहाँ 10 मा जन्मनुभएको थियोth फेब्रुअरी 1995 को उनको आमा, मरियम क्यामेरा र बुबा, सेकुको केता, कोककिरी, गिनी मा।
केईताले आफ्नी आमालाई हिँड्न सकेन, मरियम क्यामराले आफ्ना खुट्टाबाट सामानहरू समात्न थाले। आफ्नो पिताको अनुसार, Sekou Keita, नाबी एक फुटबल-केन्द्र बचपन थियो र उनको भाग्य एक निर्णय गर्ने बित्तिकै नै निर्णय भएको थियो।
नाबी केइटाको अनुसार हानिकारक शब्दहरू हँसिलो लाग्यो;
"मेरी आमाले मलाई भन्नुभयो कि टेबलबाट पसेको कुरा हो, चाहे यो पानी वा नारंगीको बोतल थियो, म यसको साथ डराउँछु। जो पनि म त लास गर्न सक्नु भएको थियो, म आफैले यसको साथमा मनोरञ्जन गर्नेछु। कुनै कुरामा उनले मलाई लिन सक्दछन्, म यो गर्नेछु। "
पछि बच्चाको रूपमा, ऊ जहिले पनि बलको वरिपरि चाहन्थ्यो। नाबी केइटा लजालु, शान्त तर विलक्षण र ऊर्जावान प्रकारको बच्चाको रूपमा देखिन्थ्यो।
Naby Keita बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -शिक्षा बनाइएको फुटबल
त्यसपछि बच्चाको रूपमा, यो अनिवार्य थियो कि नाबी केता फुटबलमा एक क्यारियर खोज्न चाहान्छु। तथापि, तिनका आमाबाबुले तिनलाई विभिन्न मार्गमा डोऱ्याउने प्रयास गरे कि धेरै पछिल्ला घटनाहरूको बाहेक, फुटबल मात्र गिनीमा धनी र जोडिएको थियो।
तिनको आमाबाबु, सेकुउ र मरियमले छोरालाई अध्ययन गर्न चाहन्थे। उनीहरूले शिक्षा महसुस गर्थे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र स्थिर थियो।
नाबी उनीहरूको इच्छा पालन गरे तर स्कूलमा उत्तीर्ण परीक्षामा संघर्ष गरे। आदर्श रूप मा, उनको टाउको तर फुटबल मा केहि पनि थिएन। तिनका आमाबाबुले खोजे र प्रयास गरे, तर उनीहरूले उनीहरूको छोरालाई आफ्ना पुस्तकहरू माया गर्न सक्थे।
केहि बिन्दुमा, केटाको परिवारका सबैजना (भाइहरू, बहिनीहरू, काका, काकी आदि) ले फुटबल खेल्नको लागि उनको समर्थनलाई समर्थन गरे। यस समयमा उनका बाबुआमासँग सहयोगको लागि बाहेक अरू विकल्प थिएन किनभने उनीहरूले आफ्नो छोरामा देखेका थिए, एक दुर्लभ फुटबल प्रतिभा.
Naby Keita बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -लिवरपूल प्रारम्भिक सम्पर्क
१२ बर्षमा, नाबी केइटालाई स्थानीय स्काउट्सले पहिल्यै सल्लाह दिइरहेको थियो कि उसको प्रतिभाले उसलाई युरोपमा लैजान सक्छ। जे होस्, त्यस्ता विचारहरू ऊ जस्तो केटाकेटीलाई प्रशोधन गर्न को लागी धेरै थियो किनकि ऊ मानसिक रूपमा त्यस्तो ठूलो चरणको लागि तयार थिएन। त्यस बेला, युरोपमा उसको एक मात्र पहुंच टिभीमा धेरै लिग १, च्याम्पियन्स लिग र प्रिमियर लिग खेलहरू हेर्न अवलोकन केन्द्रहरूको भ्रमण गर्नु थियो।
आफ्नो परिवारमा गरीबीको बिरूद्ध लड्न, नाबी केइटाले यो विश्वास बढाउनु परेको थियो कि उनी एक दिन यूरोपमा खेल्ने छन्। ऊ फुटबलर बन्न कटिबद्ध थियो, उसले खेललाई मात्र मन पराउँदैनथ्यो तर उनी आफ्नो परिवार र आफन्तहरुका लागि प्रदान गर्न चाहन्थे। Naby Keita, त्यस समयमा कोलिया, गुयना मा उनको स्थानीय क्लब को लागी १० नम्बरको शर्ट लगाउनु भएको थियो।
नबी केईताले जो पनि सकेका थिए र कहिलेकाँही, उनी स्यान्डल र पुरानो क्षतिग्रस्त जूताहरू लगाए जस्तै उनको अन्य साथीले (माथि फोटो हेर्नुहोस्)। त्यसपछि, तिनीहरूले फुटबल खेल खेल्न कुनै पनि सानो क्षेत्र प्रयोग गर्दछन् तापनि तपाईं सडकमा खेलिरहेका छन् र गिनीको सडकमा कारहरू डुबाइदिन्छन्। तिनका शब्दहरूमा
"हामी कहीं पनि त्यहाँ खेल्नेछ त्यहाँ खुला ठाउँ थियो, जुन प्रायजसो सडकमा थियो र हामी कार चकित हुनेछ !. म धेरै पटक टकराएको थियो, तर म जाँदैछु किनभने म कहिल्यै पनि गुमाउनु हुँदैन। केहीले मलाई बलबाट अलग गर्न सकेन र मैले सडकमा मेरो अनुभवबाट धेरै धेरै सिके। "
फुटबल क्याप्टेन र शाइजर्ड्स बिना खेल्न सक्ने क्षमताले खेलको पिचमा नबी केतालाई डरलाग्दो बनायो। उहाँले यसलाई राख्नुहुन्छ;
"मैले फुटबल र खरगोश फुटबल शर्टहरू दिएँ जुन मलाई दिइएको थियो। खुसीले मलाई मलाई एक पेशेवरको रूपमा अझ राम्रोको लागि तैयार हुन मद्दत गर्यो। आज, म पिच मा केहि पनि डराएको छैन। "
नाबी फुटबल शर्टको अभावमा अझै पनि आफ्नो स्थानीय क्यारियरमा प्रगति गर्दछ। पछि, उनको टोली (Horoya) लिभरपूल जर्सी लगाउने थियो। कुनै श doubt्का बिना, ऊ रातो बन्नको लागि जन्मेको थियो जसरी उनी तलको फोटोमा देखिन्छ (दोस्रो देखि बायाँ)। चित्र हेरेर, यो विश्वास गर्न गाह्रो छ नाबी अग्लो हुन्छन्। यद्यपि अनुहार बुद्धिमानी, ऊ धेरै परिवर्तन भएन।
माथिको तस्वीरबाट देखिएझैं, Naby Keita आफ्नो टीमका साथीहरू र आफ्ना विपक्षमा समेत सबैभन्दा सानो थियो। सबैभन्दा सानो हुनुको मतलब उसले सबै कुराको लागि झगडा गर्नुपर्‍यो; खेल्ने अवसर र ठूला खेलाडीहरूबाट सम्मान पाउने। यसले उसको आक्रमणलाई निम्त्यायो, जसरी उनी सानो र शक्तिशाली थिए।
Naby Keita बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -फ्रान्स जाँदै
16 मा, नाबी यूरोपीय फुटबल उत्साह संग बाढी थियो तर के आशा गर्न को बारे मा अनिश्चित। खुसीसाथ, चमत्कारको अन्तमा, उनीहरूलाई फ्रान्सेली फुटबल अकादमीले परीक्षाको लागि बोलाएको थियो जुन फ्रांसीसी फुटबल अकादमीले देशमा गएर केही फ्रांसीसी स्केट्सहरूद्वारा। किनकि उनीहरूले उनलाई कुनै सशस्त्र सम्झौता दिएनन् जसको मोनिजहरू संलग्न थिए, तिनका आमाबाबु र आफन्तहरू भ्रष्ट भए। जस्तै नाबी केईले स्वीकार गरे।
“उनीहरूले मलाई यति टाढा जान नदेऊन् र उनीहरू कसरी चिन्तित थिए कि म कसरी नयाँ वरपर वरिपरिको सामना गर्ने छु। पछि उनीहरूले महसुस गरे कि यो परिवारको लागि हो, गरीबीको बिरूद्ध। ”
फ्रान्स भन्दा धेरै गाह्रो थियो नाबीले भाषाको फरक बाहेक सबैको रूपमा कल्पना गरेको हुन सक्छ। त्यसपछि फिर्ता आफ्नो देशमा, नाबी आफ्नो साथीहरु संग फुटबल खेल्न प्रयोग भएको थियो। यो समय, उनी अजनबीहरू थिए जो कहिल्यै हँसिलो वा उनको साथ खेलेका थिएन तर सधैँ सधैँ आफैलाई राख्न चाहन्छ।
Naby Keita बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -अस्वीकार
टोलीका साथ थप प्रशिक्षणको क्रममा, उनको प्रशिक्षकले उहाँलाई एक चोटि सोध्नुभएका चीजहरू गर्न को लागी तिनले कहिल्यै सुनेनन्। धेरै फुटबल नियमहरू प्रयोग गरिएको थियो जुन कीतालाई बुझ्न सकेन वा कुनै सुन्नु हुँदैन। यो उनको टोलीले एक्लै छोडे र उदास द्वारा मजाक र अस्वीकृति को मूल कारण थियो।
यसको जवाफमा, नाबी केइताले कन्केरी, गिनी र फ्रान्सको बीचमा पछाडी फर्केर गएका थिए, जहाँ उनको फ्रान्सेली टोलीले अस्वीकार गर्दा उनीहरूले आफ्नो आक्रोशमा खाए। यो समय नै नै भन्छिन्;
मैले अस्वीकार गरेजस्तै, मैले आश्चर्य गर्थे कि यदि मैले यसलाई कहिल्यै बनाउथें। यो साँच्चै एक कठिन समय थियो।
केइटाले भने र जारी राख्यो ...
तपाईं आफ्नो सपना को छूने को दूरी को भित्र छ, त यो पतन हुन्छ र तपाईं फेरि देखि शुरू गर्न को लागी छ।
नाबी केईका लागि उनको अस्वीकार अवधिको बारेमा सबैभन्दा अचम्मलाग्दो कुरा उनको बारेमा अपरिचित ठाउँमा वा विपरित फ्रांसीसी संस्कृति वा विपरित समुहका साथ झगडा भएको थिएन तर भक्तपुरको सिमानामा उहाँले यसलाई राख्नुहुन्छ;
"म खेलको व्यावसायिक पक्षलाई कहिल्यै झुकिरहेको थिएन। म एक अकादमी मा नहीं बढ्यो र मलाई थाहा थियो कि सबै चीजहरु जहां म बल मिल्यो, यस संग चलाएँ, केही कौशल दिखाओ, खिलाडियों को हरा र स्कोर।
आफ्ना समस्याहरूको बारेमा सुन्नु, उहाँका आमाबाबुले छोराको बारेमा धेरै चिन्तित हुनुभयो। केताले तिनीहरूलाई दिनभरि6पटक बोलाउन थाल्नु भनेको सबै कुरा ठीक हुनेछ।
Naby Keita बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -उनीहरूको सीमा पारित
अन्ततः नाबी किताले युरोपेली फुटबल विधिहरू सिकेका थिए जसले उनलाई फ्रांसीसी अकादमी क्लबको लागि अत्यावश्यक र सुरक्षित रूपमा प्रभावशाली फुटबलरको रूपमा देखाए।
उनीहरूले अफ्रिकी शैलीलाई सिकाउँदा, अब उनीहरूले निलम्बन गर्न सक्दछन्, रक्षा गर्न, इन्टरनेट, खेल स्विच गर्न, छिटो संक्रमण, विच्छेद वा विचलित पार्नु र उनको पक्षको टेम्पोमा हिसाब गर्न सक्नुहुनेछ। यो अफ्रिकी र युरोपेली शैलीको एक अद्वितीय, बहुमूल्य संयोजन थियो।
Naby Keita बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -प्रसिद्धिको कारण
यस समयमा नाबी आफ्नो वरिष्ठ क्यारियर सुरू गर्न पाकिएको थियो। ले मन, जसले रोज्नुभयो Didier Drogba आइवरी कोस्टबाट क्याईताको सम्भावना उच्च स्तरको पहिलो क्लब थियो तर उनीहरूले 18 मा भर्ती गर्न असमर्थ थिए किनभने तिनीहरू दिवालियापनको पङ्क्तिमा थिए। यद्यपि, तिनीहरूका एक कर्मचारीले "नरम हीरा"अर्को क्लबको खेलकुद निर्देशक एफसी आईस्ट्रेसमा। एक सकारात्मक समीक्षा पछि, फ्रान्सको दक्षिणीमा क्लबले एकैचोटि एक परीक्षणको व्यवस्था गर्दछ। सौभाग्य देखि, नाबी मा तत्काल छाप गरे र क्लब को एक अंश बन्यो। केईले यसलाई राख्दछन्;
मैले यति लामो समय पर्खेको थिएँ। धेरै असम्भव भएको भए तापनि मैले मेरो पहिलो मौका पाए जुन मैले युरोपमा साबित गरेको हुँ
एफआईसी आइस्ट्रेसका लागि कठिन थियो कि केतालाई धेरै आकर्षक प्रस्तावहरू आए। एक सिजन पछि, क्लबले उनलाई रेड बुल साल्जबर्गमा बेचेका थिए जहाँ उनी भेटिए र सबै भन्दा राम्रो मित्र भए Sadio मनी (तीन वर्ष तिनको वरिष्ठ) जसले पछि साउथमप्टनमा सारियो। क्लबको आगमनमा, केताले प्रतिस्पर्धा गरे। उहाँले एक पटक प्रकट गर्नुभयो।
"पहिलोमा, म सुरु हुँदैन र यो धेरै निराशाजनक थियो। मैले यसलाई मनपराएन र यसले बस्तीमा अवधि कठिन बनायो। तर Sadio मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीले मलाई भन्यो, 'मेरो सानो भाई, शान्त बस। तपाईंको मौका आउँछ र जब यो हुन्छ, तपाईंले यसको अधिकतम लाभ उठाउनुहुनेछ। '
Sadio मनी केटालाई सबै चीजको साथ मद्दत पुर्‍यायो - भाषा, साथीहरू बनाउने, क्लब र शहर बुझ्ने। रेड बुल साल्जबर्गमा हुँदा तल दुबै साथीहरूको फोटो छ।
र, निस्सन्देह, माने आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथीको रूपमा ठीक थिए एक पटक केटाले अन्ततः पहिलो टीममा मौका पायो। अवसर आउँदा र सबै चीज सहजै हुँदा केइताले आफ्ना गुणहरू देखाउन कहिल्यै हिचकिचाएनन्। धेरै प्रस्तावहरू फेरि आए र केइटा आरबी लाइपजिगमा सरेका छन् जहाँ उनी टोलीका साथीहरू र राम्रा साथीहरू भएका थिए तिमो वार्नर.
आफ्नो मित्र संग पुनर्मुन गर्न बोली मा, Sadio मनी आश्वस्त जर्गन क्लप्प केता र Klopp लिभरपूलको लागि खेल्न इंग्ल्यान्डलाई ल्याउन सहमत भए। दुबै साथीले अन्ततः एकताबद्ध भए।
Naby Keita बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -फेलिशिंग कागजात
२०१ 2017 को सेप्टेम्बरको वरिपरि, जर्मन अखबारले रिपोर्ट गरे अनुसार कागजात झूटा कारण केटालाई € ,415,000,००० डलर चार्ज गरियो। यो उसको नक्कली ड्राइभर इजाजतपत्रको बारेमा थियो। जर्मनीमा अर्को ड्राइभर इजाजतपत्र लिन नबी केइटा अफ्रिकी गुयनीको जाली ड्राइभर इजाजतपत्र तयार गर्न गए। दुर्भाग्यवश, उनी दुबै आफ्नै देश (गुयना) र जर्मनीका अधिकारीहरूको संयुक्त सहकार्यको कारण पक्राउ परे।
लीपेजिगको जिल्ला अदालत (एनिमेशन Leipzig) यसको वाक्य आधारित Keita को शुद्ध आय प्रति वर्ष लगभग तीन लाख यूरो मा आधारित। बचावको क्रममा, केइताका वकिलहरूले पेनाल्टी आदेशको विरुद्ध अपील गरे जुन २€,०००,००० (£ २,००,०००) मा कम भएको देखियो।
Naby Keita बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -पारिवारिक तथ्यहरू
जब कीता 11 वा 12 को वरिपरिका थिए, उनको साथीहरू र तिनका पिताले डेकोलाई उपनाम दिएका थिए किनभने उनीहरूले सोचेका थिए कि उनले उनी पूर्व चेल्सी र एफसी बार्सिलोना खेलाडीको रूपमा खेले। जस्तै नैबी किटिन
"म डेको, टिटि क्यामारा वा पास्कल फेन्डुन्नो हुन चाहन्थें जब म जवान थिएँ, र अब उनीहरूको शर्टको पछाडि मेरो नामको बच्चाहरू छन्! यो मेरो लागि ठूलो प्रेरणा हो र म आशा गर्छु कि उनीहरूले उनीहरूले केहि पनि हासिल गर्न सक्ने साहस र अठोटका साथ देखाए।
नाबी केइटाको बुबा लिभरपूलको एक विशाल प्रशंसक हो! उहाँ प्रकट गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म उहाँ सम्झन सक्नुहुन्छ, उनको बुबा क्लबको बारेमा बौलाहा थिए कयतालाई थाहा थिएन कि लिभरपूल एक बच्चाको रूपमा के हो। लिभरपुलको नाबी केइटाको ज्ञानको अवधि सुरू भयो स्टीवन गेरार्डको शासनकाल र 2005 इस्तानबुल सम्झनाहरु।
नाबी केइटाकी आमा प्राय: हरेक तीन महिनामा भेट्न आउँछिन् र उनीसँगै बस्छिन्। Naby Keita भन्छन् रूपमा;
"अब मलाई चारैतिर सबै कुरा चाट्नको लागि चिल्लाउन छैन, तर त्यो अझै मेरो चट्टान हो। म मेरो परिवार बिना केहि पनि छैनु, र जे भएपनि के हुन्छ भने, म कहाँबाट छु भनेर कहिल्यै बिर्सन सक्दिन। "
Naby Keita बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -क्यारियर तथ्यहरू
जब उहाँ घर फर्कनुहुन्छ;
“जब म कन्नाक्रीमा फर्कन्छु, सडकमा केटाकेटीहरू सडकमा खेलिरहेका छन्, सडकमा जूत्ताविना खेल्दै छन्। म जत्ति सक्दो धेरै बच्चाहरूको लागि फिर्ता आउँदा म जहिले पनि किन्छु किनकि मलाई थाहा हुन्छ कि यति सजिलोको केहि मतलब छ। गुयनामा यति सीप र प्रतिभा छ कि यसले मलाई गर्वले भरिन्छ। ”
आगमनको लागि आशा
"यसले तपाईं कसरी गरीब हुनुहुन्छ, वा तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भने फरक छैन, यदि तपाइँ बलिदान गर्न तयार हुनुहुन्छ, कडा मेहनत गर्न इच्छुक र आफ्नो सपनाको लागि लड्न कहिल्यै रोक्न सक्नुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ।"
कीतालाई गतिशील, बाकस-देखि-बक्समा मध्य मिडफिल्डर भनिन्छ। उनले दायरा र शुद्धता संग बल वितरण गर्न पनि सक्षम छन्, प्राय: गोल स्कोर र तुलना गरिएको छ एन'कोलो कन्टे र डेको.
केईताले 2017 लक्ष्य 50 मा तोड्न पछि जारी राख्यो, जुन गत वर्षको विश्वमा 50 सबैभन्दा राम्रो खेलाडीहरू राखिएको छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो नाबी केता बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईंले केहि देख्नु भयो जुन यस लेखमा ठिकै लाग्दैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी दिनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!